Keskin: Havacılık 'Öncü Sektör' Olarak Türkiye'nin Yüz Akı Olmayı Sürdürüyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီSharp က: လေကြောင်းတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux အဖြစ် '' စက်မှုဝန်ကြီးဦးစီး '' ရှိနေဆဲ
27 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လေဆိပ်, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
ပြည်နယ်လေဆိပ်အုပ်ချုပ်ရေး (Sama) အထွေထွေမန်နေဂျာနှင့်ဥက္ကဋ္ဌHüseyin Keskin, တရားဝင်တွစ်တာအကောင့်မှလေယာဉ်, ခရီးသည်နှင့်ဝန်စာရင်းဇယားများ၏တစ်နှစ် 2019 8 ၏ပထမဦးဆုံးလတစ်လ၏လေကြောင်း (အဆိုပါ @dhmihkesk) မျှဝေခြင်း, "လေကြောင်းဆိုင်ရာ '' ဦးဆောင်ကဏ္ဍများ '' တူရကီအမျိုး၏မာနဖြစ်ဆက်လက်အဖြစ်," ဟု၎င်းကပြောသည်။
တူရကီရဲ့စာရင်းအင်းအချက်အလက်တွေကနေကြီးမားတဲ့လေကြောင်းနှင့်အတူကြမ်းပြင်ဟာကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အောင်မြင်မှုသက်သေခံသောသင့်လျော်သောမူဝါဒသည် Apply ။ လေကြောင်း "ဦးဆောင်ကဏ္ဍ" တွင်နီးပါးသုံးခြံတိုးတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux အတွက်ဖြစ်ဆက်လက်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွက်နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်၏လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်တင်ယာဉ်အသွားအလာ။
ကျနော်တို့ဖျောပွနိုငျအဖြစ်ဟာအလွန်ကောင်းတဲ့စားပွဲပေါ်မှာမှညွှန်ပြလေယာဉ်ခရီးသည်နှင့်ဝန်စာရင်းဇယားများ၏တနှစ်နှင့်လေကြောင်းသြဂုတ်လ 2019 နှစ်ပေါင်း၏ပထမဦးဆုံးရှစ်လ "သြဂုတ်လကောင်းကြီးမင်္ဂလာများလေကောင်းလေ" ။
23.262.843 လေဆိပ်, ခရီးသည်ဝန်ဆောင်မှုသြဂုတ်လအတွင်းကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်အကူးအပြောင်းခရီးသည်နှင့်အတူအဆိုပါရှစ်လတာကာလအတွင်းစုစုပေါင်းခရီးသည်အသွားအလာ 140.121.303 မှာရပ်နေ၏။
ကြောင်းလေကြောင်းအသွားအလာပိတ်ထားတာနဲ့လစဉ်ကာလအတွင်းလေယာဉ်ဆင်းသက်, အထက်အကူးအပြောင်းနှင့်အတူစုစုပေါင်း 207.239 သို့ရောက်ရှိ။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအချက်အလက်များ၏ပထမရှစ်လအတွင်းနေသောခေါင်းစဉ်: ဆင်းသက်-takeoff လေယာဉ်များအသွားအလာ 1.038.587; စုစုပေါင်း 317.078 1.355.665 အပါအဝင်အထက်ဖြတ်သန်းအသွားအလာ။
လေဆိပ်ကုန်တင် (ကုန်တင်, mail နဲ့အိတ်) အသွားအလာ; သြဂုတ်လအဖြစ်ယခုနှစ်အတွင်းစုစုပေါင်း 354.078 တန်ချိန်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ယခုနှစ်ပထမရှစ်လအတွင်းစုစုပေါင်းကုန်တင်ယာဉ်အသွားအလာလေဆိပ် 2.166.070 တန်ချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဝန်ဆောင်မှုဧရိယာခရီးသွားစင်တာများအတွက်လေဆိပ်ခရီးသည်အရေအတွက်ရယ်ရင်ဆိုင်နေကြရသည်။ ယာဉ်အသွားအလာသိပ်သည်းစုစုပေါင်း 261.179 ရှစ်လတာကာလသည်အဘယ်မှာရှိလေဆိပ်ကဤလိုင်းများပြင်ပ; 40.023.639 လေကြောင်းအသွားအလာအားဖြင့်ခရီးသည်အသွားအလာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
အမြင့်ဆုံးအဆင့်မှာလေယာဉ်ခရီးစဉ်လုံခြုံမှုနှင့်ခရီးသည်နှစ်သိမ့်ပေး, ပိုကျပိုခရီးသည်အရည်အသွေးကိုဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အားလုံးကိုငါတို့အစွမ်းသတ္တိနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဦးမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဤအကောင်းသောရလဒ်များကိုမှလှူဒါန်းခဲ့သူ cardio ကျေးဇူးငါ့အလိုရှိသမျှလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ ...
ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်နယ်လေဆိပ်များအာဏာပိုင် Sharp က: 'လေကြောင်းဆိုင်ရာတူရကီရဲ့မကျြနှာကို flux' ' 09 / 09 / 2019 လေယာဉ်၏အဲယားဝေး၏ပထမလတွင်ပြည်နယ်လေဆိပ်စီမံခန့်ခွဲမှုမှ General Manager Hüseyin Keskin, 2019 8, ဝန်စာရင်းဇယားနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်မျှဝေခရီးသည်, တူရကီတွင် "လေကြောင်း '' ဦးဆောင်ကဏ္ဍများ '' ...
Duzce တက္ကသိုလ်မြန်နှုန်းရထား Panel ကိုအတူဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခန်းက္ပဦးစီး Continues 30 / 03 / 2017 Düzce Üniversitesi Hızlı Tren Paneliyle Bölgesel Kalkınmadaki Öncü Rolünü Sürdürüyor :Eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında bölgesel kalkınma çalışmalarında da öncü yükseköğretim kurumu olan Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Düzce Valiliği işbirliğiyle düzenlenen…
ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်Hüseyin Keskin ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့တာဝန်! Hüseyin Keskin ဘယျသူနညျး 27 / 07 / 2019 Hüseyin Keskin သည်အထင်ကရမန်နေဂျာနှင့်အစိုးရလေဆိပ်အာဏာပိုင်များ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကChairman္ဌအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ 25 ဇူလိုင်လ 2019 ရက်စွဲကိုတရားဝင်ပြန်တမ်းတွင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီး 30842 နံပါတ်ကိုသမ္မတပြဌာန်းချက်သည်အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည် - "ပြည်နယ်လေဆိပ်များ ...
GM ကတူရကီအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) မီးရထားစီမံကိန်းအဘိဓါန်ဝလေ Kona လေကြောင်းအဆောက်အအုံသတ္တုအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထောက်ပံ့ရေးတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. JCC ၏ဆောက်လုပ်ရေးမှကန့်ကွက်တွေ့ရှိခဲ့ 27 / 04 / 2012 အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပမည့်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, "တူရကီ - ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ဂျော်ဂျီယာ (karstiflis) မီးရထား Sub နှင့် Superstructure ပြီးစီး" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ၊ ပြောကြားခဲ့့သည်က ...
GM ကတူရကီအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) ကို GCC အဘိဓါန်ဝလေ Kona လေကြောင်းကုမ္ပဏီအတွက်ရထားလမ်းစီမံကိန်းများဆီဖြည့အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. မိမိအအယူခံဝင်ငွငျးပယျ 30 / 05 / 2012 အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအားဖြင့်ကျင်းပမည့်အခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု, "တူရကီ - ဂျော်ဂျီယာ (Kars-Tbilisi) မီးရထား Sub နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ Superstructure ပြီးစီး" အသစ်ကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု၏ဝယ်ယူရေးနှင့်စပ်လျဉ်းမှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဂ္ဂဇင်းမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ၊ ပြည်သူ့ ...
Duzce တက္ကသိုလ်မြန်နှုန်းရထား Panel ကိုအတူဒေသတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အခန်းက္ပဦးစီး Continues
ပြည်နယ်လေဆိပ်အာဏာပိုင်Hüseyin Keskin ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့တာဝန်! Hüseyin Keskin ဘယျသူနညျး
GM ကတူရကီအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) မီးရထားစီမံကိန်းအဘိဓါန်ဝလေ Kona လေကြောင်းအဆောက်အအုံသတ္တုအောက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်နှင့်ထောက်ပံ့ရေးတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. JCC ၏ဆောက်လုပ်ရေးမှကန့်ကွက်တွေ့ရှိခဲ့
GM ကတူရကီအခြေခံအဆောက်အအုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု - ဂျော်ဂျီယာ (Kars - Tbilisi) ကို GCC အဘိဓါန်ဝလေ Kona လေကြောင်းကုမ္ပဏီအတွက်ရထားလမ်းစီမံကိန်းများဆီဖြည့အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure ဆောက်လုပ်ရေးတင်ဒါနှင့် ပတ်သက်. မိမိအအယူခံဝင်ငွငျးပယျ
Izmir, တူရကီစက်ဘီး '' စီမံကိန်းကိုမြို့ပြရှေ့ဆောင်များကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်လာကြ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (286) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (509) ဇူလိုင်လ 2019 (634) ဇွန်လ 2019 (502) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (582) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (970) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)